बेपत्ता आउने आशमा आफन्त « Naya Page
जाजरकोट, १६ फागुन । अभिभावकको माया, स्नेहमा बस्न कसलाई पो मन हुँदैन र ? आफन्तले दिने सल्लाह अनि दिशानिर्देशबाट भावी कार्य सम्पादन गर्ने रहर नभएको को होला ? जनयुद्धकालमा बेपत्ता बनाइएका शिक्षक अहिले २० वर्षसम्म कहाँ छन् भन्ने परिवारलाई जानकारी छैन । दैनिक बुवाको सम्झनामा भेरी नगरपालिका–२ की शारदा शर्मालाई झस्काउने गर्दछ ।